mba hanomezana fialamboly ny ankizy sy amporisihina azy ireo ho tia mamaky boky mandritra izao fotoana tsy hianaran'ny mpianatra izao araka ny fampitaham-baovao nataon` ny teo anivon` ny « Editions Jeunes Malgaches » . Na dia misy aza ny fitokana monina faobe ho an'ny Malagasy rehetra dia tsy tokony ho adinon'ny ankizy ny mamerin-desona sy mijerijery kahie indraindray. Amin'izao koa dia afaka hihaino tantara ihany koa izy ireo amin'ny vata fandraisam-peo isan'andro mandritra ny iray volana ka araho eto àry ny fandaharan'ireo radio misy any amin'ny faritra misy anao ahafahanao manaraka ireo tantara mahafinaritra nosoratan'ireo mpanoratra malagasy miisa 4. Tsy iza izany fa Rakotoanosy Marie Michèle, Ralimahenintsoa Jeanne, Veloniaina Rabakoly ary i Arikaomisa Randria. Hisy ihany koa famoahana ireo boky navadika ho feo ireo eto amin'ny tambazotra facebook fa mba mangataka ny rehetra mba tsy handika azy ireo ka hanaparitaka azy fa misy zon'ny mpamorona mila hajaina. Entanina koa isika manana fahefa-mividy mba hividy ny bokin'ireo mpanoratra ireo rehefa miverina amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena mba ho fanohanana sy fisaorana azy ireo nanao maimaipoana ity hetsika ity, hoy hatrany ny mpikarakara.